वासुदेव (चलचित्र) - विकिपिडिया
thumb|चलचित्र वासुदेवको पोस्टर
डा. ध्रुवचन्द्र गौतम
महाकवी लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको यात्री कविता
वासुदेव (चलचित्र) एक नेपाली कथानक चलचित्र हो । आख्यानकार डा. ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास ‘कट्टेल सरको चोटपटक’ मा आधारित रहेर २०३९ सालमा सुटिङ सुरु भएको यो फिल्म २०४१ मा सार्वजनिक प्रदर्शनीमा आएको थियो ।
०३७ सालमा उपन्यास ‘कट्टेल सरकार चोटपटक’ बजारमा आयो । आएकै वर्ष नीर शाहले पढे । कथा उनको आँखामै बिलायो । उनलाई यसमा चलचित्र बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । लेखक डा. ध्रुवचन्द्र गौतमसँग उनले अनुमति मागे । गौतमले पनि स्वीकृति दिए । शाहले चलचित्र निर्माण सुरु गरे । साढे तीन लाख रुपैयाँ शाहसँगै थियो । उनले साथीसँग साढे तीन लाख हाल्न लगाए । सात लाख जम्मा भयो । तर, त्यतिले चलचित्र निर्माण हुने अवस्था थिएन । उनले व्यापारी विनोद चौधरीलाई सम्झिए । उनले ‘कट्टेल सरको चोटपटक - वासुदेव’ उपन्यास पुस्तक चौधरीलाई पढ्न भनेर दिए । उनले पनि लगानी गर्न तयार रहेको बताए । चलचित्रमा सात लाख रुपैयाँ उनले लगानी गरे । १४ लाखमा चलचित्र निर्माण भयो ।
कुमार (नीर शाह) व्यापारमार्फत कालोधन कमाउँथे । वासुदेव सर ( हरिहर शर्मा ) चलचित्रमा आदर्श चरित्र हुन्छन् । वासुदेव सर आदर्शको प्रतिमूर्ति हुन्छ । उनको शिर सधैं उचो हुन्छ । आफ्नै व्यापारी साथी कुमारको लोभलालचबाट उनी सधैं टाढै रहन्छन् । तर कुमारले उनको नैतिकतामाथि पलपलमा प्रहार गरिरहन्छ । उनको नैतिकता डगाएर आफ्नो व्यापारको हिस्सा बनाउन चाहन्छ । तर सतीसाल जस्तै वासुदेवको नैतिकता झन् बलियो हुँदै गएको देखेर चुर भएको कुमार वासुदेवकै घरमा पुगेर उसकी छोरी र श्रीमतीको इज्जत लुट्न खोज्छ । कुमारको व्यवहारले अति भएपछी, वासुदेव कुमारको घर पुगेर उसको घाँटी थिचेर मारिदिन्छ र भन्छ– यो देशलाई तँजस्ता मान्छेको आवश्यकता छैन ।
कुमारको हत्या गरेर निस्किएको वासुदेव हृदयघातले मर्छ ।
↑ ३२ वर्षपछि ‘वासुदेव’
↑ २.० २.१ ‘वासुदेव’को कथा
नेपाली चलचित्र उद्योग
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=वासुदेव_(चलचित्र)&oldid=749292" बाट निकालिएको
अन्तिम सम्पादन २ अक्टोबर २०१९, १६:२०